I-Semalt Expert Shares Amathiphu Wokuthengisa Amavidiyo Wonke ama-SEO Champion Kufanele Azi
Ekukhangiseni okuku-intanethi, ukusebenza kwe-search engine (SEO) kubalulekile kubantu abaningiufisa ukwenza amabhizinisi abo isikhathi eside. Ukuthuthukisa okuqukethwe kulula ngoba kuhilela amasu awaziwayo. Noma kunjalo, ukuthengiswa kwe-digitalama-ejensi athola le nqubo eqondile ikakhulukazi uma engazi ukuthi benzeni. Ukusebenzisa injini yokusesha ngevidiyo kuyadingeka kuwo wonke ama-intanethiokuqukethwe - cheap vape gear. Kusukela ngo-2006, i-Google ithenge i-YouTube futhi kusukela ngaleso sikhathi, ukusebenzisa i-SEO kumavidyo kliphu kubaluleke kakhulu njengokunye okunye okuqukethwe kwe-intanethi.
Iningi izinkampani zithola ukusetshenziswa kwamavidiyo ngezindlela ezihlukahlukene. Isibonelo, ama-FAQ amaningi futhiIzifundiswa zidinga izindlela zevidiyo enhle yokufundisa. Njengoba ekwazi ukubaluleka kwe-SEO yamavidiyo, omunye angase azibuze ukuthi angayisebenzisa kanjani.
u-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ichaza amathiphu amaningana ayigugu angenza amavidiyo akunike isikhundla esiphakeme:
Kubalulekile ukufaka amagama angukhiye ngaphakathi ebhodini lezindaba lomlayezo wakho. Ividiyokufanele isebenze nje njenge-athikili ekuthunyelwe kwebhulogi. Amavidiyo kufanele abe aphelele, afundise kodwa akwanele ngokwanele. Ucwaningo oluningi lubonisa lokhoAbasebenzisi abajwayelekile bachitha cishe amaminithi amabili kuvidiyo. Gcina ubude bevidiyo yakho bufushane: cishe amaminithi angu-5. Amavidiyo akhulisa ukufakwa kwendawo yonkekokuqukethwe kwakho kanye nokunikeza indawo yokufundisa yamaklayenti akho asebenzayo ukuze uchofoze futhi uthole okuqukethwe okufanelekile..Amavidiyo atholaukwabelana ngamapulatifomu afana ne-YouTube. I-Google bots ingathatha izixhumanisi ezabelwana ngazo kamuva eziba yizinqubo zokubeka iningiyamawebhusayithi.
Umbono, izinhloso, nokubaluleka kwepulani ye-SEO plan yizici ezibalulekilecabangela. Omunye angasetha umkhankaso wokukhangisa wevidiyo ophumelelayo nomsebenzi oqinile. Noma kunjalo, izinhloso zevidiyo zinomthelela omkhulungokubaluleka kwabantu abasebenzisa. Isibonelo, ividiyo eyenzelwe ukufaka uphawu lokufaka uphawu ingase ifundise futhi ibandakanye ukuthenga manje izinqubo. Noma kunjalo, ividiyo yenkampani yomshuwalense yezizathu zemfundo kungenzeka ingabi nayo.Esikhundleni salokho, zikhulu ngokubeka igama elingukhiye.
Uma umuntu efuna ividiyo e-intanethi, ubukeli buyinto engabantu abaningicabangela. Amavidiyo anokuhola noma angayenza ukwabelana kungenye yezindlela ezihlakaniphile kakhulu zokuthola ukugeleza okuqhubekayo kokubukwa.Amasu amaningana angenza ividiyo ifinyelele kule nqanaba elandelayo. Isibonelo, ukuhlanganiswa kokucubungula kwamabhuku. Umuntu angafakaimibhalo engezansi, amazwibela kanye netheksthi echazayo kuvidiyo. Le nqubo ivuselela ngokubili ukubonwa okubukwayo nokuhlolisisaukwandisa ukufaneleka.
Ku-SEO yanamuhla, ukudalulwa kokuqukethwe nokukhangiswa kwamavidiyo yizindlela ezithile ezintshazithinta kakhulu emaqhinga amaningi we-SEO. Ozakwethu kanye nami sincoma ukusebenzisa le mboni ikakhulukazi kulabo abalaleliibhekisela kumavidiyo ngezincazelo. Nakuba le mibono emibili ingase ibonakale ihlukile, kokubili amasu okuthengisa digital futhi abeikhono lokukhulisa ukuguqulwa. Amavidiyo afanele ekuchazeni kanye nokuqondisa izilaleli ukuthi zenzeniizici zokushaya ucingo zesayithi lakho. Ngenxa yalokho, ukumaketha kwevidiyo kungaba yisixazululo emsebenzini wokubeka iwebhusayithi yakho kuwebhusayithi, ikakhulukaziizinjini.